Photovoltaic Solar Energy-Uhlaziyo oluhlaza | Ukuhlaziywa okuluhlaza (iphepha 2)
Kule posi uya kuyazi indlela yokufaka i-solar panels inyathelo inyathelo. Funda izibonelelo zokusebenzisa amandla elanga.
Sikuxelela yonke into ofuna ukuyazi malunga nokumpompa amandla elanga kunye neempawu zayo. Ngena ukuze ufunde ngakumbi ngale nkqubo intsha.
Ufakelo lwe Photovoltaic
Kule nqaku sikubonisa ukuba loluphi ufakelo lwe-photovoltaic kwaye zeziphi izibonelelo zamandla okuzisebenzisa ngokwakho.
Sikuxelela yonke into ofuna ukuyifumana malunga neethayile zophahla lwelanga. Ngena apha ukuze ufunde malunga nokusetyenziswa kunye nezibonelelo zale teknoloji ye-photovoltaic.
Kule nqaku sikubonisa ukuba yintoni igadi yelanga kwaye isebenza njani. Ukongeza, uya kuba nakho ukwazi zonke izibonelelo ezibonelelwa lolu hlobo lwamandla.
Ngena apha ukuze ufunde ukuba yintoni isiphumo se-photovoltaic kwaye senziwa njani. Funda ukuba iipaneli zelanga zisebenza njani kwasekuqaleni.
Iibhetri zelanga zikulungele ukusebenzisa amandla elanga xa zingavumelekanga ukuba ziveliswe ziimeko. Funda ngazo zonke apha.
Itshaja yelanga sisixhobo esiguqula ngokupheleleyo esisebenza ngamandla ahlaziyekayo. Ngena apha ukwazi yonke into malunga nayo.
Iimpawu, ukusebenza kunye neemfuno zezibane zitalato yelanga
Funda ukuba zisebenza njani izibane zelanga ezitalatweni, uyilo lotshintsho oluqhubekayo ezixekweni. Ngaba uyafuna ukwazi ngakumbi ngayo?
Esi sithuba sithetha malunga nokuba yintoni amandla e-photovoltaic elanga, ukuba aveliswa njani kwaye asebenzise ntoni. Ngaba uyafuna ukufunda yonke into malunga nesi sihloko?
Esi sithuba sithetha ngeempawu ze-inverter yangoku kunye nendlela yokuyisebenzisa kufakelo lwelanga. Ufuna ukwazi okungakumbi?
Esi sithuba sithetha ngeempawu eziphambili zekiti yelanga kunye nezibonelelo ezibonelelwa ngofakelo. Ngaba uyafuna ukwazi ngakumbi ngayo?
Indawo yokuqala yamandla elanga edadayo eNetherlands
Isityalo samandla elanga esidada siseNetherlands, amandla elanga avelisiweyo aya kuba yi-15% ngaphezulu kunaleyo inokufunyanwa kwizityalo zelanga ezisemhlabeni kwaye ziya kubandakanya iipesenti ezingama-75 zamandla elizwe.
Ukuhlaziywa kwe-EDP kuya kubonelela ngamandla ahlaziyekayo kuNestlé eMelika
U-Nestlé uza kujoyina uluhlu lwamazwe ngamazwe azinikele ekuvuseleleni kwizityalo zawo e-United States.Zeziphi ezinye iinkampani ezizinikeleyo ekuvuseleleni?
Emva kweminyaka embalwa eyoyikisayo yokuphinda ihlaziyeke ngenxa yokusikwa liqela elidumileyo, kubonakala ngathi inzala iyabuyela kutyalo-mali kwizinto ezinokuphinda zenziwe, ngakumbi i-photovoltaics.Yintoni isizathu soku?
Amandla ahlaziyiweyo enza i-17,3% yamandla okugqibela okusetyenziswa kwamandla
Enkosi kwii-mega-fandesi ezi-3 eziye zenzeka ngo-2016 nango-2017, iSpain ingafikelela kuma-20% emveliso ehlaziyekayo ngo-2020. Loluphi uluntu oluphambili?
UPamplona uveze isicwangciso samandla, phantse i-euro ezizigidi ziya kunikezelwa ukukhuthaza ukuzisebenzisela ukuzisebenzisa, ukuphuculwa kwamandla kunye nokonga umbane. Athini amanyathelo ayo kwaye ngubani oza kuxhamla?
Ukuba ipolitiki ayiyonakalisi, iChile izakususa izityalo zayo zamalahle kule minyaka ilishumi izayo, enyanisweni kwiminyaka embalwa iphindaphinde amandla ayo ahlaziyekayo.Yintoni amandla abaluleke kakhulu? Ulibona njani ikamva?
Ngaba amandla ahlaziyekayo sele enenzuzo?
Iimalike zamandla ehlabathi bezitshintsha ngokuqhubekayo kangangexesha elithile, kodwa ngeli xesha zifikelele kwinqanaba elibenzima ekunzima ukuloyisa. Ngaba amandla ahlaziyekayo ngaphandle kwenkxaso-mali sele enenzuzo kwaye aphantsi phi?
Iinkampani zaseSpain zifuna ukubheja kwizinto ezinokuhlaziywa
Okwangoku eSpain, ngokungafaniyo namanye amazwe aseYurophu anjengePortugal, sifikelela kwi-17% kuphela yemveliso enokuhlaziywa. Ukutshintsha loo nto, urhulumente uvelise iifandesi ezi-3 kulo nyaka uphelileyo, kwaye iinkampani ziphendula kakuhle kwaye zifuna ukukhwela kuloliwe ohlaziyekayo.
Iindleko zokuveliswa kombane kumanani
Ngombulelo kwigophe lokufunda, iindleko zamandla ahlaziyekayo ziye zehla kakhulu kwaye ngaphezulu kokuhla kwazo. I-IRENA iqinisekisa ukuba zonke izinto ezinokuhlaziywa ziya kukhuphisana kwiminyaka embalwa.
I-European Union izakuvumela ukuzisebenzisela ukuzithengisa kunye nokuthengisa imveliso yayo yamandla ethe chatha ngaphandle kweerhafu zokuhlukumeza, ezichasene nerhafu edumileyo yelanga ebhengezwe ngumbutho othandwayo kwilizwe lethu.
Kule minyaka idlulileyo iindleko zamandla elanga ziye zancitshiswa ngendlela engakholelekiyo.Zincitshiswe nini xa kuthelekiswa namanye amandla? Yeyiphi indleko yokwenyani? Ngawaphi amazwe ababheja kwizinto ezivuselelekayo?
I-Ecocat, ikhathamane yokuqala yaseSpain esebenza ngamandla elanga
Esi sithuba sithetha ngeempawu eziphambili ze-Ecocat, ikhathamari yokuqala yaseSpain yokusebenza ngamandla elanga. Ngaba uyafuna ukwazi ukuba isebenza njani?
Ukusetyenziswa kwamalahle negesi kukhule ngenxa yemvula ephantsi nokungabikho kofakelo lwamandla amatsha ahlaziyiweyo Ithini ipesenti yokusetyenziswa kwamalahle? Ipesenti yokusetyenziswa kwezinto ezihlaziyekayo? Ngaba iya kwanda kwixesha elizayo? elizweni?
ICabildo de La palma iya kwabela i-200000 yee-euro ukunceda ukuzisebenzisa
I-Palma izakukhuthaza ukuzisebenzisa ngokwakho phakathi kwabemi bayo. Sithini isicelo sakho? Ngaba kuphela kweCabildo exhasa amandla ahlaziyekayo? Ucinga ntoni urhulumente ozimeleyo malunga namandla acocekileyo?
Ukusikwa kwezinto ezinokuhlaziywa kungabiza kakhulu eSpain
Ukucutha umvuzo ohlaziyiweyo kunokuba ngaphezulu kunexabiso kubukumkani baseSpain. Zingaphi iimbasa ezisalindelweyo, yimalini, kwaye sele iSpeyin sele igwetyelwe ukuhlawula?
IArgentina ifuna ukwandisa imveliso yayo evuselelekayo
I-Argentina ibheja kwizinto ezivuselelekayo ngendlela ebalulekileyo.Ngamanyathelo mani ayithathayo? Ngawaphi amandla ahlaziyiweyo aza kuwasebenzisa? Ucinga ntoni uMongameli Macri ngale nto?
IAragon ikhuthaza ukuvuselelwa ngeefama zomoya ezintsha kunye nezityalo zelanga
Ubuninzi beefama zomoya okanye ufakelo lwefotovoltaic ukuya kwinqanaba elincinci lwakhiwa eAragon.Baphi, kwaye banamandla mni? Yeyiphi eyona nkampani ibaluleke kakhulu yeAragonese kweli candelo, kwaye ikhuthaza njani eli candelo lizimeleyo?
U-Enel uza kuvelisa awona mandla asezantsi ehlabathini, ngakumbi kwizityalo zase-Mexico. Luhlobo luni lwamandla ahlaziyekayo aza kulisebenzisa? Iza kubiza malini, Iza kuqala nini?
IAlbacete ikwi-1 ephezulu yokuveliswa kombane ngenxa yokubuyiselwa kwezinto. Yeyiphi eyona mandla ibalulekileyo? Yeyiphi ipaki enkulu eSpain kwaye iphi, yeyiphi inkampani eyakhayo?
I-AREH, i-megaproject yokudibanisa amandla elanga kunye nomoya
Amandla elanga nawomoya asebenza kunye ukuzala iprojekthi ye-AREH ngokufakelwa kwamandla e-megawatts ezingama-6.000.
Izindlu zokugcina izityalo zelanga ziluhlobo lobuchwephesha obukrelekrele obunakho ukuvelisa amandla elanga kunye nokukhula kwezityalo ngexesha elinye. Ngaba uyafuna ukwazi ngazo?
Kwiminyaka yakutshanje e-Latin America uhlengahlengiso oluninzi lwamandla luqalisiwe ukubangela ukukhula okumandla kwamandla ahlaziyekayo.
UTesla unceda iPuerto Rico ukuba ibuyele esiqhelweni, emva kokubandezeleka ngeenkanyamba ezimbini ngoSeptemba. Zifakwa phi iipaneli zelanga?
Amaphiko ebhabhathane amnyama andisa ukusebenza kweeseli zelanga
Uphononongo olwenziwe lufumanise ukuba amaphiko amabhabhathane amnyama anokunyusa ukufunxwa kweeseli zelanga ukuya kuthi ga kwi-200%.
I-Australia ishenxisa iipremiyamu ezihlaziywa ngokutsha ukunciphisa ityala lombane
Iimali zepremiyamu zokuphinda zihlaziywe ziya kupheliswa e-Australia, konke ukunciphisa amaxabiso ombane. Ngubani oxhasa lo mlinganiso?
Umhlaba ujonge eArgentina malunga nophuhliso lwezinto ezinokuhlaziywa
Kwezi ntsuku inkongolo yeAirec 2017 ibanjelwe eArgentina ilizwe elinamathuba amaninzi kweli candelo liza kuba njani ikamva lalo?
Amandla elanga e-Photovoltaic, inkokeli phakathi kwezinto ezinokuhlaziywa
Amandla elanga ayekhokele phakathi kwezinto ezihlaziyiweyo kunyaka ophelileyo, ngaba oko kungenxa yexabiso eliphantsi kuphela? Liyintoni ikamva labo kunye nethemba labo?
I-8GW yamandla anikezelweyo iya kufuna utyalo-mali lweebhiliyoni zeerandi eziyi-8000.Zeziphi iinkampani ezixhamlileyo?
Sele kukho ngaphezulu kwe-30 arbitations ngokuchasene neSpain kwimibutho eyahlukeneyo, kodwa kuphela abatyali mali bangaphandle abanokuya kubo, iya kuba yintoni umphumo?
INkundla ePhakamileyo iyavumelana noRhulumente kwityala lokuphinda lihlaziywe
Inkundla ePhakamileyo iyaqhubeka ukulibazisa abatyali-mali abathi bacele ukusikwa kwezinto ezihlaziyiweyo, kwelinye icala, i-ICSID yavumelana nabo.
Irhafu yehlazo, ikratshi laseSpain
Irhafu yeentloni, kuphela kwelizwe lethu apho kukho irhafu yonke ilanga. Iqukethe ntoni? Sikuxelela ukuba ikuchaphazela njani, iya kuba naliphi ixabiso?
Emva kweminyaka emi-3, amandla ahlaziyekayo ayakhula kwakhona
Kwifandesi yamandla ahlaziyekayo ebanjwe kutshanje. Ngaphezulu kwe-8 GW sele inikiwe, ethi kwithuba elifutshane ibangele ukuba icandelo lisebenze kwakhona.
Esona sityalo sikhulu sombane welanga emhlabeni siya kwakhiwa e-Australia
Esona sityalo sikhulu sombane welanga emhlabeni siya kubekwa e-Australia, aya kuba yintoni amandla aso? eziluncedo nezingeloncedo? isebenza njani, kwaye iza kubiza malini?
Sikuxelela yonke into malunga neTesla Powerwall 2, isizukulwana sesibini sebhetri yeTesla. Yahluke njani kwimodeli yangaphambili?
Bakhulisa iipaneli zelanga ezisebenza ngokugqobhoza okungaphantsi
Oosonzululwazi baseTshayina benze iipaneli zelanga ezikwaziyo ukuvelisa umbane ngeentsuku ezinamafu, ngemvula, ngenkungu okanye nasebusuku.
Ukukhupha i-greenhouse emissions skyrocket ngenxa yembalela
Ukunqongophala kwamanzi kwimigxobhozo kubangele ukukhutshwa kwegesi yendlu eluhlaza Kwisiqingatha sokuqala sonyaka, icandelo lakhupha i-17,2 yezigidi ngaphezulu.
ISpain ibuyela ukubheja kumandla ahlaziyekayo
Emva kweminyaka embalwa eyoyikisayo kwicandelo, kubonakala ngathi bakubonile ukukhanya ngeefandesi ezi-3 zokugqibela ezenziwayo ukufezekisa iinjongo ze-EU.
Izigidi ezingama-228 zeCanary Islands Fdcan ziya kusetyenziswa kwiiprojekthi ezinokuphinda zihlaziywe ezingama-90
Enkosi kwiiCanary Islands FDCAN, ezinye iiprojekthi ezingama-90 zokuphucula ulawulo lwamandla kwiziqithi ezahlukileyo ziya kufumana inkxaso-mali eyi- $ 228 yezigidi.
INicaragua, kunye neCosta Rica neSweden, kunye neNicaragua, ziinkokeli zehlabathi kwisizukulwana sokuphumeza umbane ohlaziyekayo.
IPortugal ilawula ukusebenza phantse iveki kuphela ngamandla ahlaziyekayo
Yonke iPortugal ibaleke kangangeentsuku ezi-4 ngokuhlaziywa. Kokokuqala ukuba ilizwe eliphuhlileyo lisebenzise kuphela izinto ezinokuhlaziywa ixesha elide.
Oololiwe baseHybrid abaneepaneli zelanga baqala ukuqengqeleka eIndiya
I-Indian Railways ihambisa abantu abangama-23 ezigidi kunye ne-2,65 yezigidi zeetoni zempahla yonke imihla. Obu bungakanani bamanani budinga utshintsho lwemodeli
I-Iran inyusa ukuzibophelela kwayo kumandla ahlaziyekayo
I-Iran inamandla amakhulu emveliso ehlaziyekayo kuMbindi Mpuma, njengomoya, i-geothermal, i-hydroelectric, i-solar kunye ne-thermal
Imeko yamandla ahlaziyekayo eSpain kunye nembono ye2020
Okwangoku kukho iithagethi zamandla ezintathu, ekufuneka zithathelwe ingqalelo kwintengiso yaseYurophu ngowama-2020 (oko kubizwa ngokuba "kathathu ngama-20")
I-ACS iphumelele kakhulu kwifandesi yokugqibela ehlaziyekayo
I-ACS iphumelele kwifandesi yamandla ahlaziyekayo. I-1550MW ye-photovoltaic inikezelwe. U-Forestalia no-Enel nabo bafumene isabelo sabo kwikhekhe
Elona xesha lilindelekileyo kwifandesi evuselelekayo yesithathu
Ifandesi igcina iikhrayitheriya ezifanayo zolwabiwo olulawulwa ngoMeyi kwaye ziphikiswa ngokungqongqo ngabaxhasi be-photovoltaic,
Izityalo zelanga ezidadayo
Izityalo zelanga ezijikelezayo ziqalisile ukukhula kule minyaka idlulileyo. Indlela yayo ifana naleyo yeefama zomoya ezingaselunxwemeni
Ukukhula okungenakunqandeka kwezinto ezihlaziyiweyo
Ingxelo yakutshanje eboniswe nguMbutho weREN21 ibonisa ukukhula okungenakunqandeka kwezinto ezivuselelekayo, ikamva labo elithembisayo nekamva elingcono.
Iipremiyamu zohlaziyo ziya kuhla ukunciphisa amaxabiso ombane
Urhulumente uza kuyiphonononga inzuzo efanelekileyo yokuvuselelwa ukusuka ngo-2020, ufuna ukwehlisa iipremiyamu ukwehlisa ixabiso lombane ukuya kuthi ga kwi-10%
Amaxabiso amandla elanga azakwehla ngama-27% ngowama-2022
Amaxabiso efakelo yamandla elanga nge-photovoltaic kunye notyalo-mali ziya kuqhubeka ukwehla ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-27 ngowama-2022.
Icandelo lezolimo ligxila kwi-25% yamandla elanga
Icandelo lezolimo kunye nokunkcenkceshela sele ligxile kwi-25% yezityalo zamandla elanga ze-photovoltaic zokuzisebenzisa
ICalifornia ivelisa amandla elanga kakhulu
Amandla elanga amaninzi aveliswa yiCalifornia kangangokuba kufuneka bahlawule amazwe angabamelwane ukuze bathathe imveliso yabo eseleyo.
Ifandesi elandelayo yamandla avuselelweyo iya kuba nge-26 kaJulayi
Emva kwempumelelo yefandesi yokugqibela, urhulumente ubhengeze enye i-3000MW ngoJulayi 26, imigaqo iya kufana neyangaphambili.
Indlela yokunciphisa iindleko zokufaka amandla elanga
Enye yeengxaki zokubheja kumandla ahlaziyekayo lixabiso eliphezulu lokuqala lotyalo-mali abanalo. Kwenziwa iinzame zokunciphisa ezi ndleko.
Ukuzisebenzisa ngokwakho kuthathelwa ingqalelo yi-EU njengenye yezona zinto zibaluleke kakhulu ekusebenziseni amandla. Ngaba isebenza ngokufanayo kuwo onke amazwe?
Urhulumente uza kuhlaziya inzuzo yokuhlaziywa phantsi kwe-2020
Urhulumente akazimiselanga ukugcina 'inzuzo efanelekileyo' yangoku, ekupheleni kwexesha lokuqala lolawulo u-2014-2019 uyakuhlisa iipremiyamu
Amandla ahlaziyiweyo enza inani elikhulu lemisebenzi esemgangathweni. Icandelo liqeshe abantu abaninzi e-US kunerhasi, i-oyile kunye namalahle ngokudibeneyo.
Kumazwe angaphezu kwama-50, amandla elanga ngexabiso eliphantsi kuzo zonke.
Iimalike zamandla ehlabathi bezisoloko zitshintsha kangangexesha elithile ngoku, kodwa ngeli xesha zifikelele kwinqanaba elibenzima ekunzima ukuloyisa.
Siza kuba nefandesi entsha evuselelekayo
UMphathiswa wezaMandla, ezoKhenketho uveze ifandesi entsha, le bhidi intsha iza kuba zii-megawatts ezingama-3.000 kwaye iya kumiselwa ngamandla omoya nawomoya.
Yintoni isiQithi seDogger? Isiqithi esingeyonyani esinokuvelisa amandla ahlaziyekayo kubantu abazizigidi ezingama-80.
IsiQithi i-Dogger yiprojekhthi yesiqithi eyenziweyo, inokubonelela ngombane ohlaziyekayo kwizigidi ezingama-80 zabantu eYurophu ngo-2050. Yinyani okanye yintsomi?
Irekhodi elitsha eDubai ngexabiso lamandla obushushu elanga
UDewa ubhengeze amaxabiso angaphantsi kwe-10ct yeendibaniselwano ezikhetha isigaba sesine se-200 MW ye-Mohammed bin Rashid CSP.
URhulumente ubuya ukuze axhamle amandla omoya kwifandesi elandelayo
Icandelo loMphathiswa wezaMandla lithumele i-CNMC uyilo lokulawula ifandesi ye-3GW yezinto ezinokuhlaziywa, ngethemba lokuba iya kuvalwa ngaphandle kwenkqubo.
Utshintsho olumangalisayo lwe-Forestalia
I-Forestalia iphinde yatshayela kwifandesi yezinto ezivuselelekayo ezenziwa nguRhulumente ngoMeyi ophelileyo, yanikwa i-1.200 megawatts (MW) kuma-3.000 anikiweyo.
Ukuphuculwa kwamandla ahlaziyekayo eSpain
Ukusukela ukuphela kuka-2011, uthotho lwamanyathelo owiso-mthetho avunyiweyo achaphazele ngokupheleleyo ukukhula kwamandla ahlaziyekileyo eSpain.
Imithombo ehlaziyiweyo iya kuba nefashoni kumazwe amaninzi amakhulu
Ziyanda iinkampani ezibhejela ukufumana amandla eziwafunayo kwimithombo evuselelekayo. Iberdrola ibonelela ngamandla kwiApple, Amazon, Nike phakathi kwabanye
ISpain iyala ilanga: ukuzisebenzisela kunye nokunyusa
ISpain iyala ilanga kunye nokuzisebenzisa ngokwakho elangeni, okwenza abemi bahlawule ngaphezulu kwityala labo lombane. URhulumente akabhejeli kumandla elanga.
ISpain iqokelela ubuncinci izikhalazo ezingama-27 kwimibutho yamazwe aphesheya njenge-ICSID. Amabango ewonke ayi- $ 3.500m, nangona enokufikelela kwi-6.000.
Amandla omoya atshayele ifandesi, bonke abaphumeleleyo banikezele ngesaphulelo esiphezulu. I-Enel (500MW) yeGesi yeNdalo (650MW), iMidlalo (206MW) kunye neForestalia (1200MW)
Ukulinganisa ubungakanani bento eveliswayo kumandla ahlaziyekayo, i-Arhente yaMandla yaMazwe ngaMazwe yenze ibhalansi yonyaka ka-2016.
ISpain ilahlekelwe ngumlamli wokuqala wamazwe aphesheya ngenxa yokusikwa kwezinto ezivuselelekayo
ISpain ilahlekelwe yinto yokuqala yamatyala aphesheya ngaphambi kwe-ICSID, ngenxa yokusikwa okusetyenzisiweyo ukusukela ngo-2010 ukunceda amandla ahlaziyekayo
Inkampani yaseSpain (TSK) ngasemva kwepaki enkulu yelanga eAsia
IDubai inofakelo olutsha lwelanga entlango. Ipaki ibizwa ngokuba ngu-Mohammed Bin Rashid, eyakhiwe yi-TSK kwaye yeyona inkulu eMbindi Mpuma.
Amandla elanga ... ngemvula! Iseli entsha yelanga kunye negraphene
Ngokuphuhliswa kweseli entsha yelanga ngegraphene kuya kubakho ukufumana amandla elanga ngamathontsi emvula. Ukuphumelela kwamandla elanga.
Urhulumente upapashe kwi-BOE egunyazisa i-Renovables de Sevilla SL i-110MW Guillena photovoltaic ufakelo lwelanga. Ikamva lamandla elanga.
Umbutho weeNkampani zaMandla aVuselelekayo-i-APPA iyayigxeka imvula, ukungabikho kwemvumelwano kunye nokusilela kokucwangcisela ifandesi evuselelekayo.
Ngaba kufanelekile ukuthenga iipaneli zesola ezisetyenziswayo?
Phambi kokuba sithenge iiphaneli zesola ezisebenzisekayo, kufuneka sihlalutye imiba eyahlukeneyo eya kwenza utyalo-mali lwethu lube nenzuzo.
I-Photovoltaic boom eLatin America
Ukusuka ekungabinakho ukufakelwa kwe-photovoltaic ekuqaleni kwesi shumi leminyaka ukuqikelela kwangaphambili ngaphezu kwe-40 GW efakwe esiphelweni sayo.
Kwiminyaka eli-10, izinto ezivuselelekayo ziya kuba sesona sixhobo sitshiphu sinexabiso
Kwi-2016, i-9% yamandla ahlaziyekayo afakelwe, ngelixa i-23% encinci ityalwe kunonyaka ophelileyo ngenxa yemveliso enkulu kwicandelo.
IGreenpeace ithi umhlaba onamandla acocekileyo kubo bonke unokwenzeka kwaye unakho ukusebenza, yiyo loo nto uzinikele ekupheliseni ezinye zeentsomi ezibaluleke kakhulu.
URhulumente unciphisa «iipremiyamu» kwifandesi elandelayo yezinto ezinokuhlaziywa
UMphathiswa ulinciphisile elona xabiso liphezulu loncedo kubantu abaphumeleleyo kwifandesi elandelayo. I-11% yomoya, kunye ne-22% ye-photovoltaic
I-UNEF icela i-TS ukuba iyirhoxise ifandesi yezinto ezivuselelekayo
I-UNEF icele iNkundla ePhakamileyo ukuba isebenzise amanyathelo okhuseleko okumiswa kwefandesi elandelayo yokuhlaziywa. Kuba ithanda amandla omoya
Amandla elanga akwifashoni
Amanqwanqwa amatsha kwi-photovoltaics, amaziko amatsha, ikamva lamandla ahlaziyekayo, iindlela ezintsha, ubulungisa be-Intersolar eJamani.
Amandla elanga xa ithelekiswa neminye imithombo yamandla ehlaziyekayo
Olona thuba lubalulekileyo lwamandla elanga ngaphezulu kwezinye izinto ezinokuhlaziywa njengamandla omoya kunye namandla e-hydraulic.
Inkqubela phambili eya kuguqula amandla ahlaziyekayo (Iiphaneli zelanga eziDadayo kunye neSolar Tinta)
Inkqubela phambili kwezobuchwephesha yenze ukuba ilanga kunye nomoya kube lula ukuzisebenzisa. Izimvo zokuphucula ukusebenza kwakho ngokufanelekileyo. Ikamva elizayo
IJamani icwangcisa ukuzisa i-3,8 yezigidi zamakhaya ukurenta amandla e-photovoltaic
Ukuvela kwamandla efotovoltaic kunye namandla ombane, iimodeli ezintsha zorhwebo, ukuzisebenzisela ukuzisebenzisa, izihlanganisi zasekhaya nezamashishini, iibhetri zeLithium-ion
Olona fakelo lukhulu lwamandla elanga eCórdoba lukwivenkile enkulu
Ivenkile enkulu yakwaDeza ifake i-photovoltaics ezingama-32,4 kW ukuze uzenzele ngokwakho, nto leyo eza kukuvumela ukuba wonge i-15% yetyala lakho lombane.
Yenza iseli ephezulu yelanga
U-Yoshikawa uveze iphaneli yokuqala ye-photovoltaic edlula ukusebenza kwe-26% ukuguqula ukukhanya kube ngamandla elanga.
Umzi mveliso omtsha kaTesla eHawaii: Iibhetri ezingama-272 kwenye
I-Tesla iyaqhubeka nesicwangciso sayo sokwandisa ukubonelela ngamandla acocekileyo kwiziqithi ezikude kwiPasifiki. IHyperLoop, SpaceX, Solarcity, Powerwall, Powerpack
Izityholo zaseBrussels ngokuchasene nemiqobo ebekwe yiSpain ekusebenziseni umbane, i-veto yabemi kunye ne-PP ekusebenziseni ngokwakho. Ukuhlaziywa kwamandla ohlaziyo
I-28% yombane wehlabathi ngo-2021 iya kuhlaziywa
Inkxalabo ngemeko-bume ikhulile kumaxesha akutshanje phakathi kwabemi behlabathi. Amandla oMbane oHlaziyiweyo. Iinjini zomoya ezintsha
Izinto ezi-5 eziphambili zelanga eziye zaphawula eyona
Zininzi izinto eziveliswa lilanga, ezinye zilula kwaye ezinye zinamabhongo amakhulu abonise ukuba amandla ahlaziyekayo anokuthenjwa
Sibala ukuba zingaphi iipaneli zelanga ozifunayo, abona baphambili bamandla elanga, kunye nokuvela kwayo kwiminyaka ezayo
Iveliswa njani i-photovoltaic energy yelanga, siyisebenzisa kumaphi amacandelo? Iya kuguquka njani kwaye iya kuba yintoni ikamva layo?
Umhlaba uzama ukwenza okona kuninzi kwamandla acocekileyo: ukugubungela iindlela, iindlela noololiwe ngophahla lwe-photovoltaic yelanga ngoku lukhetho
"Ixesha lezibaso ziphelile, sikwixesha lamandla ahlaziyekayo"
Ukuvela kweQonga leSola yesithathu, ikamva lamandla ahlaziyekayo. Iimpawu zoMkomishinala waseYurophu wokuSebenza kweMozulu kunye naMandla uMiguel Arias Cañete.
Ikhilomitha enye yendlela ende yelanga eNormandy
Iprojekthi yeWattway, indlela yokuqala yelanga eyakhiwe eFrance, kunye neenzuzo zayo kunye neengozi emva kokuxabisa i-5 yezigidi. Iindlela ezintsha zokuvelisa amandla
Iipaneli zelanga ezidadayo, isisombululo sokungabikho kwendawo
I-Japan kunye ne-South Korea zikhokelela ekusetyenzisweni kwamadama okufakela iiphaneli ze-photovoltaic ukubonelela amawaka abemi
Umzi mveliso welanga emhlabeni
Sihlalutya imeko yangoku yemizi-mveliso yelanga emhlabeni, ezona zinto ziphambili kuzo, kunye nokuvela kwayo kwiminyaka ezayo
ICuba yakha iipaki zelanga ezingama-59 ukuvelisa amandla acocekileyo
ICuba yakha iipaki ezingama-59 zelanga kwaye ifuna ukujoyina injongo yokufikelela kwi-24% yokuveliswa kombane kumandla acocekileyo ngowama-2030.
Unokwenza amanzi aseleke ngamandla elanga
Iminyaka, umsebenzi wenziwe ekuphuculeni ubuchule bokwenza amanzi asele. Ngaba amanzi anokwenziwa aselwayo ngamandla elanga?
Ukufakwa kwelanga enkulu kwifama yebhokhwe kwiiCanary Islands
Ifama ebekwe eBetancuria (eFuerteventura) ibisebenzisa amandla aveliswa sisityalo esisebenza ngokwanele ngelanga kangangeeveki ezimbalwa.
Icandelo elenziwa ngokutsha linokuchaphazeleka kakhulu yinkxaso-mali esezantsi, kodwa ezinye iiprojekthi ziyayifumana ngenxa yendlela ezintsha abazenze ngayo.
Iiseli ezintsha zelanga ziphucula ukusebenza kwamandla kwezakhiwo
Iingcali zaseYurophu ziphuhlise iiseli ezintsha ze-organic photovoltaic eziphucula ukusebenza kwamandla kwizakhiwo.
I-Extremadura luluntu oluzimeleyo eligubungela awona mandla ngamandla ahlaziyekayo
I-Extremadura iye yaba luLuntu oluZimeleyo lwaseSpain olugubungela owona mbane unamandla ngombane kumandla elanga.
I-Barcelona izakwenza indawo yorhwebo yamandla ahlaziyekayo
I-Barcelona iyakwenza iziko eliza kuthi lithenge kwaye lithengise amandla ahlaziyekayo aveliswe kwizakhiwo zabucala okanye zikarhulumente kwi-2019.
Isiqithi sokuqala kwiMeditera esibonelelwa kuphela ngamandla ahlaziyekayo
I-Tilos, isiqithi esikuLwandle lweMeditera, kokokuqala ukubonelelwa kuphela ngamandla ahlaziyekayo enkosi kwiprojekthi ye "Horizonte Tilos"
Iiseli zelanga zelanga zeFotovoltaic
Ukusukela ngo-2011 kunye nembonakalo yemithombo yeendaba ye-WYSIPS, siva malunga neeseli zelanga ezibonisa ukukhanya kwizicelo ezininzi, ...
Amandla elanga anokulawula izinto ezivuselelekayo ngo-2030
Ngokwamandla acocekileyo, amandla elanga, ekonzakaliseni ukukhula okukhawulezayo iminyaka emi-5, iyaqhubeka ...
URawlemon, ummandla welanga onamandla ngakumbi kuneepaneli ze-photovoltaic
Emva kweminyaka eliqela yophuhliso, umqokeleli welanga waseRawlemon uqala umsebenzi wakhe wezorhwebo. Yenziwe ngumzobi waseJamani, yibhola ebonakalayo egcwaliswe ngamanzi ekwaziyo ukuguqula amandla angama-70% ngaphezulu kwepaneli yodidi lwelanga.
Amandla angama-400 amandla angaphezu kwepaneli yendabuko yelanga eyenza le bhaluni yelanga
Ezi bhaluni zelanga zinokuba zizinto ezitshintshayo zotshintsho olukhulu ngokunxulumene namandla elanga kwihlabathi liphela.
ISolarCity yazisa ezona ndawo zisebenza kakuhle elanga
ISolarCity ibhengeze iintsuku ezi-3 ezidlulileyo iiphaneli zelanga ngokusebenza okuphezulu ngalo mzuzu ngeepesenti ezingama-22.
ISweden iphindwe kabini ukusebenza kwelanga ukuya kwi-34%
Ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-34 kukuphuculwa kokusebenza kwelanga, ukuphindaphinda okweepaneli eziqhelekileyo zelanga
Amandla elanga aqokelelwa yiseyile zenqanawa
Inkampani yaseFrance ivelise iiseli ze-photovoltaic ezifakwe kwiiseyile zenqanawa kwaye zikwazi ukubonelela nge-1 kW.
Indawo yokupaka ene-canopies yelanga ngumbono omkhulu
Kukho isixa esifanelekileyo seepaki zeemoto esixekweni kwaye ukuba ezi zigutyungelwe ngoophahla belanga banokuba neenzuzo ezininzi
IplanethiSolar, isikhephe esinikwe amandla yi-100% ngamandla elanga
IplanethiSolar ijikeleze umhlaba ayiqhubanga nto ngaphandle kwe-100% yamandla elanga
Iiseli ze-Photovoltaic kwipeyinti yokutshiza
Abaphandi kwiYunivesithi yaseSheffield, e-United Kingdom, benze iiseli ze-photovoltaic ezinokusetyenziswa njengepeyinti ye-aerosol.
Iiphaneli ze-photovoltaic ezizimeleyo, uguquko olutsha
Inqaku elinomdla malunga neepaneli zelanga ezizisebenzisayo eziphuhliswe liqela lophando lweYunivesithi yaseStanford
Ukucocwa kwamanzi amdaka kusetyenziswa amandla elanga
Inqaku elinomdla malunga neprojekthi eyenziwayo kwiYunivesithi yaseAlmería yokunyanga amanzi amdaka.
Iprojekthi yamandla elanga kwizikolo ezisemaphandleni
Kancinci kancinci iiprojekthi zamandla elanga ziyaphuhliselwa izikolo ezisemaphandleni. Enye yezi projekthi ifikelele esiphelweni eVélez, apho zikhona ezinye izikolo zasemaphandleni
UMzantsi Afrika kunye namandla awo kumandla elanga
UMzantsi Afrika unokuba ngumvelisi omkhulu wamandla elanga kwixesha elizayo
I-Acciona, iphenyane elisebenzisa amandla ahlaziyekayo
Amandla ahlaziyekayo anokusetyenziswa kwiindawo ezahlukeneyo kwaye enye yezi ndawo ikwi-regattas. Idlulile…
ICoca Cola izakusebenzisa amandla elanga kumzi mveliso wayo eMzantsi Afrika
ICoca Cola iza kusebenzisa amandla elanga kwisityalo eMzantsi Afrika
Iinqwelo zegalufa ezinikwe amandla elanga
Iinqwelo zegalufa ezisebenza ngamandla elanga
UNestlé usebenzisa amandla elanga ekwenzeni iayisi khrim
Umzi-mveliso we-ice cream kaNestle ufake inkqubo yamandla elanga
Iiphaneli zelanga ezinemibala
Imodeli entsha yeepaneli zemibala yelanga yaziswa
Ilaphu elineepaneli zelanga ezivelisa amandla
Itekhnoloji yelanga kumalaphu yenye yeeprojekthi ezinobuchule ngokwamandla acocekileyo
Kuyenzeka ukuba kufumaneke ukubanda kwiipaneli zelanga ze-photovoltaic zokusebenzisa ii-air conditioner ngendlela yendalo: ukunciphisa ukusetyenziswa kwamandla kunye nokukhutshwa kwe-CO2.
Isibane sokuqala sesitalato eArgentina
Amandla elanga ngumthombo wangoku wokusetyenziswa kwamandla
ISahara kunye namandla ayo njengomthombo wamandla
ISahara inamandla amakhulu okuba ngowona mthombo wamandla wehlabathi.
Umzi-mveliso wehotele licandelo elibalulekileyo lezoqoqosho kuba kukho amawaka eehotele zabo bonke ubungakanani emhlabeni….
Uphahla lweglasi yamandla
Ifakwe eMalaga, kwifama, apho inophahla lwethayile yeglasi, eyi ...
Iintlanga zebhanti yelanga okanye i-sunbelt
Amazwe akwi-latitude + -35 ngokubhekisele kwi-Ecuador ayaziwa njengeengingqi ze-sunbelt ...
Ngamanye amaxesha, ezona zixhobo zilula nezona zininzi zendalo, zinokuba luncedo olukhulu kwaye zihlangane ukuze zibonelele ngombane ...
Iewotshi ezinobuhlobo ezinobuhlobo
Zonke iintlobo zeemveliso ezisetyenziswa mihla le ziyaboniswa kwimarike yezinto ezinokusingqongileyo kunye ...